स्वास्थ्य जाँच – Health Post Nepal
महोत्तरीको मटिहानी पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै डा. गोविन्द केसी
महोत्तरीको स्वास्थ्य चौकी मटिहानी पुगेर डा. गोविन्द केसीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेका छन्। उनले बुधबारदेखि हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगहरूको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेका हुन्। जोर्नी रोगबाट ग्रसित दीर्घ रोगीलाई नि:शुल्क उपचार सुरु गरिएको उनका सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्र झाले...
उपत्यका भित्रिने सबैको अनिवार्य ज्वरो जाँचिने
सरकारले अब उपत्यका भित्रिने सबैको ज्वरो मापन गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने भएको छ। उपत्यका भित्रिने मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि सो नीति लिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उपत्यका छिर्ने तीन नाकामा हेल्थ डेक्सको...